Yangon Airways: Ọ bụ nke ndị na-ere ọgwụ ọjọọ na-agbasawanye n'ihi teknụzụ ọhụụ nke French?
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Yangon Airways: Ọ bụ nke ndị na-ere ọgwụ ọjọọ na-agbasawanye n'ihi teknụzụ ọhụụ nke French?
E guzobere Yangon Airways na Ọktọba 1996 dị ka ụgbọ elu nke ụlọ na nkwonkwo aka n'etiti Myanma Airways, onye nwe ụgbọ elu obodo na Myanmar na Krong-Sombat Company nke Thailand. Linegbọ elu ahụ guzobere isi ụlọ ọrụ ya na ọdụ mmezi ya na Yangon. N'ọnwa Ọktọba 1997, onye nwe ụgbọ elu ugbu a nwetara òkè nke ụlọ ọrụ Thai wee nweta òkè nke Myanma Airways na 2005. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụgbọ elu ahụ ghọrọ ụgbọ elu nke ndị nwe obodo na Myanmar. Linegbọ elu ahụ ghọrọ usoro isi ụgbọelu na-arụ ọrụ ụlọ, usoro ọrụ na ọrụ ụgbọelu si Yangon gaa 13 isi azụmaahịa na ebe ndị njem na Myanmar. N'ime afọ atọ gara aga, Yangon Airways na-aga n'ihu na-enweta oke ahịa; ọ nwere ihe dịka 37% na 2007 wee bawanye na 41% na 2008.
Airgbọ elu ọzọ site na otu aha Yangon-Airways na-ekwu na webụsaịtị ha www.yangonair.com na www.yangon-airways.com, anaghị agbakwunye na Yangon Airways Ltd. airgbọ elu ahụ na-ekwu na ụgbọ elu ahụ bụ nke ECCR Travel nke na-abụghịzi Yangon Airways 'General Sales Agent. “Anyị enweghị ike ibu ọrụ maka tiketi ọ bụla ma ọ bụ ntinye akwụkwọ sitere na weebụsaịtị a.
Ọ na - agbagwoju anya mgbe edochaghị anya nke ụgbọelu abụọ nwere aha otu aha nke United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) na ndepụta aha ndị mba na ndị akpọrọ (SDN). N'okpuru iwu gọọmentị United States, amachibidoro ndị America iso ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ edepụtara dị ka SDN. Ọ bụ OFAC họpụtara Yangon Airways na 2008 ka ndị ahịa ọgwụ ọjọọ nke United Wa State Army zụtara ya.
Yangon Airways akwagala na Zenith® PSS (Usoro Ọrụ Ndị Njem), nke TTI (Travel Technology Interactive) nyere.
Maazị Aung Min Khaing, Onye isi nchịkwa nke Yangon Airways kwuru, sị, 'Mbugharị na Zenith® PSS bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, na ndị otu TTI na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu na ndị ọrụ arụmọrụ Yangon Airways, ọ gara nke ọma ma kwe ka anyị nwee nnukwu njikwa nke ụgwọ na njikwa ngwaahịa anyị. Anyị na-ahụworị uru na arụmọrụ na usoro azụmaahịa anyị site na iji ọrụ dị mfe na ọrụ bara ụba nke Zenith®.
Maazị Aung Min Khaing gara n'ihu, 'Thekwaga na Zenith® PSS bụ ihe mbụ dị ka akụkụ nke mmemme mmeba azụmaahịa anyị, ebe anyị ga-abawanye ahịa anyị, jikọọ na ndị ọrụ njem njem ntanetị site na Zenith® API na, anyị bụkwa na-atụle Codeshare na Interline, nke Zenith® ga-enyere anyị aka. Ogologo oge TTI na nke ọma na Myanmar na-eweta Yangon Airways nnukwu uru. '
Maazị Gregoire Echalier, onye isi oche nke TTI kwuru, sị, 'Ọ bụ nnukwu ihe ọ toụ iso ndị otu Yangon Airways rụọ ọrụ na njem a dị mkpa, ịdị uchu na ọrụ aka ha bụ ezigbo ihe n exemomi.'
Dabere na Paul Martin, ọnụ na-ekwuchitere ndị mmadụ maka TTI ụgbọ elu anaghị anara kaadị kredit ihe nwere ike ịbụ n'ihi nnabata US.
Echalier gara n'ihu, 'Obi dị anyị ụtọ ịbụ akụkụ nke uto Yangon Airways, na-enyere ha aka ịgbasawanye ahịa ha ruru yana ike ọrụ ha na mmekọrịta ha na ndị ụgbọ elu ndị ọzọ. TTI nwere ọtụtụ ndị ahịa ụgbọ elu maka Zenith® na Myanmar, afọ ole na ole ugbu a, na-agbakwunye Yangon Airways na Zenith Customer base gosipụtara n'ezie ikike anyị nwere maka ijikwa azụmahịa PSS / IT maka ụgbọ elu na South East Asia '.
Ndi Njikọ Teknụzụ Njem Njem bụ ụlọ ọrụ mba ofesi France. Ọ bụ onye na - eweta ihe ngwọta maka ụlọ ọrụ ụgbọelu, ọkachamara na sọftụwia IT maka njikwa ụgbọ elu
Ezigbo uwe na-enweghị ebe obibi na Waikiki ugbu a na-arịọ ndị njem nleta maka ego
Switzerland-Belhotels International gbasaa n'ike n'ike na Africa
Australia njem njem
Ihe onyonyo Australia dika obodo nke iwu, ịha nhatanha na oke ruru mmadu gasịla